FITATERANA : Manambana ny hampiakatra saran-dalana ny zotra nasionaly | NewsMada
Ho tra-pahasahirana indray ny mpandeha amin’ny saran-dalana.
Mampikaikaika ireo mpandraharaha mpitatitra eo anivon’ny zotra rezionaly sy zotra nasionaly ny fidangan’ny vidin-tsolika amin’izao fotoana izao. Nanomboka ny fiandohan’ny taona no ho mankaty, miakatra hatrany izany isaky ny fiandohan’ny volana. Ho azy ireo, tsy azo ihodivirana ny amin’ny tokony hampiakarana ny saran-dalana. Manambana ny hampiakatra saran-dalana, araka izany, ny zotra nasionaly sy ny zotra rezionaly. “ Feno ny fepetra hampiakarana ny saran-dalana ary efa tokony hihatra izay. Misy ny fitsipika izay iombonan’ny mpitatitra nasionaly sy rezionaly ao anatin’ny fivondronamben’ny mpitatitra. Noho izany, amin’ny alalan’ny fivoriambe no anapahana izay fampiakarana izay”, hoy Rakotondrafara Fredinard, filohan’ireo mpandraharaha mpitatitra nasionaly sy rezionaly, etsy amin’ny Fasan’ny Karana. Io fivoriana io, raha ny fantatra, hotanterahina ato ho ato. Nohazavainy fa efa mihoatra ny 3250 ariary ny vidin-tsolika, izay fepetra tsy tokony hampiakarana ny vidin-tsolika.
Tsy niolaka ity solontenan’ny mpitatitra ity nilaza fa iangonan’ny rihitra ny fandraharahana amin’ny fitaterana, satria miaina anaty fatiantoka izy ireo. Navoitrany fa tsy ny fiakaran’ny vidin-tsolika ihany no tokony hampiakarana ny saran-dalana fa na ny kojakoja ilaina eo amin’ny fiarakodia koa aza, efa tokony hahafaha-mampiakatra ny saran-dalana. Ny hetra sy ny fiantohana miakatra, ny fanaovana “visite technique”, midangana ihany koa. Ny kojakoja fanolo, mbola midangana izaitsizy. Ireo rehetra ireo mbola tafiditra anaty kajikajy raha eo amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly no asian-teny, araka ny voalazan-dRakotondrafara Fredinard. Noho ireo antony ireo, vesatra miteraka fantiantoka mianjady amin’ny mpitatitra ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy misy fitsaharany isaky ny fiandohan’ny volana. Noho izany, hampiantso fivoriambe ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin’ny kaoperativam-pitaterana rezionaly sy nasionaly, ato ho ato, raha ny fantatra. Mandritra io fivoriambe io no hanapahana ny mety ho saran-dalana vaovao, araka ny nambaran’ny solontenan’izy ireo.
Une réponse à "FITATERANA : Manambana ny hampiakatra saran-dalana ny zotra nasionaly"
Rakotoarisoa Maminiaina N 11/05/2017 à 10:53
@lafiny iray manaiky ny fisondrotana raha ny zava-misy no jerena, fa @ lafiny iray koa anefa misy ireo taxi b,dia tsy manao hezaka mihitsy na ho lasa 1000ar aza ny frais.Misy ireo izay tsy manondrotra kanefa dia tsar ny fiara, madio, manaja ny arrêt,manaja ny receveur.Misy taxi b efa tsy tokony hiasa intsony:fil sisa no mampandeha azy, ny seza efa sola; mijery ambany ianao, hitanao ny arabe.Mirary soa tompoko